မ မ မြိုင် – Hlataw.com
မမမြိုင်မှာ အသက်သုံးဆယ် ခန့်ရှိ ကလေးတစ်ယောက် အမေ မုဆိုးမလေး ဖြစ်သော်လည်း အပျိုစင် ကဲ့သို့ ပင် လှပနေသူ လေးဖြစ်၏။ တဆုပ်တခဲကြီးနဲ့ အသက်ရှုလိုက်တိုင်း လှိုင်းထနေသော မမမြိုင်၏ ရွှေရင်အစုံမှာ အိစက်လို့သာနေ၏။ အလှပဆုံးကတော့ လမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း နိမ့်ချည်မြင့်ချည် တုံတုံသွားတဲ့ တဆုပ်တခဲ တင်ပါးကြီးများပင် ဖြစ်လေသည်။ မမမြိုင်ကို ရုတ်တရက်နောက်မှကြည့်လျင် အပျိုပင်အရှုံးပေးရလောက်အောင် ကိုလှသည်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ မမမြိုင်သည် ဘာကြောင့်ဒီလိုလှသည်၊ ဘာများ မမမြိုင်မှာ တပ်မက်စရာ ရှိသည် ကိုတော့ ကျွန်တော်ကမသိပါ။ ကျွန်တော့်အသက်မှာ ၁၇ နှစ်သာရှိပါသေးသည်။ မမမြိုင်ဒီအိမ်ကိုရောက်စ တုန်းကဆိုလျှင် ကျွန်တော်ဟာ မမမြိုင်ကို အရေးမစိုက်ခဲ့ပါ။ မမမြိုင်သည် သူ့ယောက်ျားဆုံးပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အိမ်ကို ရောက်လာသူဖြစ်သည်။ အမျိုးစပ်မည်ဆိုပါက လည်း မမမြိုင်နဲ့နဲနဲကလေးတော့ တော်စပ်ရပါသည်။ ကျွန်တော်၏ သုံးဝမ်းကွဲအစ်ကိုကြီးရဲ့ မိန်းမဖြစ်ပါသည်။ ကံဆိုးရှာလေတော့ မမမြိုင်မှာ စောစောစီးစီး မုဆိုးမဘဝကို ရောက်ရရှာပါသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ မမမြိုင်ကို အရေးမထား မိပေမယ့် မမမြိုင်ကတော့ ကျွန်တော့်ကို ဂရုတစိုက်ရှိသည် ကိုတော့ ကျွန်တော်အကဲခတ် မိလေသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော်ကလည်း မမမြိုင်ကို အကဲခတ်နေမိပါသည်။ မမမြိုင်၏ မို့မောက်သောရင်အစုံ စွင့်ကားနေသော တင်ပဆုံတို့မှာ မမမြိုင်၏ အလှကိုပိုလို့သာ ကြက်သရေရှိနေစေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် တခါတရံ မမမြိုင်၏ ကိုယ်ခန္ဓာကိုသာလျှင် စိတ်ဝင်စားနေမိတတ်ပါသည်။ ကျွန်တော်က လူပျိုပေါက်အရွယ်မို့လားမသိပါ မမမြိုင်၏ ရေချိုးပြီးခါစ ထဘီရင်လျားနဲ့ အချိန်တွင် တွေ့မြင် ရသော ကိုယ်ခန္ဓာကို မြင်ရလျှင် ပေါင်ကြားမှ လီးတန်မှာ အလိုအလျောက်ပင် တောင်မတ်၍ လာပါတော့သည်။ ရပ်ကွက်ထဲက ကာလသားခေါင်းလို ဖြစ်နေသော လူပျိုသိုးကြီး ကိုကြက်ကြီးကတော့ တခါကပြောဖူးသည်။
“ ငမောင်… မင်း မမမြိုင်ရဲ့ ထွားဆိုင်ကြီး ကတော့ တကယ်အားရတယ်… ကုန်းခိုင်းပြီးတော့ အားရပါးရ ဆွဲလိုက် ချင်တယ်… တကယ်ဘဲ ငါ့ကောင်ရ… သူ့ ကာတစ်ကြီးကို မြင်ချင်လို့ ငါ့မှာ မနက်စောစော လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ထွက်ထိုင်ပြီး စောင့်ကြည့်ရတာ အမော…” “ ဟာ…ဗျာ… ခင်များကလဲ… ” “ ဘာ… ခင်များကလဲ….. မင်းကတော့ တအိမ်တည်းအတူတူနေတာ… သူ ရေချိုးတဲ့အချိန်….အင်္ကျီလဲတဲ့ အချိန်တွေ ချောင်းမကြည့်ဘူးလားကွ… ” “ ဘယ်လို… ချောင်းကြည့်ရမှာလဲ ဗျာ… တော်ကြာ သိသွားရင်… အိမ်နဲ့…ကျွန်တော် ကွိုင်တက်လိမ့်မယ်….” “ ဒါလေးများကွာ…. လွယ်ပါတယ်….. ငါ…ပြောပြမယ်.. သေသေချာချာ နားထောင်… ” လူပျိုကြီးကိုကြက်ကြီးမှာ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွင် ကျွန်တော့်ကို အသေအချာ သင်ကြားပို့ချလေတော့သည်။ ကိုကြက်ကြီးပြောသလို ချောင်းကြည့်ချင်သော်လည်း ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင်တော့ မရဲသေးပါ။ မည်ကဲ့သို့ လုပ်ရမည် နည်းဟု စဉ်းစားနေရင်း တရက်တွင်တော့ အဖေနှင့်အမေက ကိစ္စရှိသဖြင့် အဘိုးတို့အိမ်ကိုသွားကြသဖြင့် အိမ်တွင် မမမြိုင်နှင့်ကျွန်တော် နှစ်ယောက်ထဲသာ ကျန်ခဲ့လေတော့သည်။ အမေမရှိသဖြင့် မမမြိုင်မှာဈေးသို့ မနက်စောစော သွားပြီး ဈေးသွားဝယ်ရလေသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ ညက ကိုကြက်ကြီးနှင့်အတူ အပြာကားသွားကြည့်ပြီး ညနက်မှ အိပ်ယာဝင်ခဲ့သဖြင့် အိပ်ယာထက်တွင် ဆက်လက်မှိန်းနေသည်။ ပေါင်ကြားမှ လီးတန်မှာလည်း တားမရ ဆီးမရ ထောင်မတ်နေလျက် ရှိလေသည်။ ကျွန်တော့်လီးတန်ကို လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ပြီး မမမြိုင်ကို မည်ကဲ့သို့ ချောင်းကြည့်ရမည်ကို စဉ်းစားခန်း ဖွင့်နေမိလေသည်။ မိနစ် ၂၀ ခန့်မျှအကြာမှာတော့ မမမြိုင်ဈေးမှ ပြန်ရောက်လာပြီး ထမင်းကြော်နေသည်။ ကျွန်တော် အိပ်ယာမှ ထပြီး သွားတိုက်၊ မျက်နှာသစ်ဖို့ရန် နောက်ဖေးဘက်ကို ထွက်လာခဲ့သည်။ “ မောင်မောင်… ဗိုက်ဆာနေပြီလား… မမမြိုင် ထမင်းကြော်နေတယ်…မျက်နှာသစ်ပြီးရင် စားလို့ရပြီ သိလား” “ ဟုတ်ကဲ့ပါ… မမမြိုင်… ကျွန်တော် ဘာကူလုပ်ပေးရအုံးမလဲ… ” “ ရပါတယ်… မျက်နှာသစ်မှာသာ သွားသစ်ချည်… ” မမမြိုင်က နဖူးမှ ချွေးလေးသုတ်ရင်း လှမ်းပြောသည်။ မနက်စောစောစီးစီး မမမြိုင်ရဲ့အလှက တမျိုးတဘာသာ လှနေသည်။ မမမြိုင်၏ ဆံပင်က ပုခုံးကျော်လောက်ထိ ဝဲကျနေသည်။ မမမြိုင်ရဲ့ မျက်ခုံးများက ထူထဲနက်မှောင် လွန်းလှသည်။ နဖူးနှင့်လည်ပင်းတွင် ချွေးလေးများ စို့နေသည်ကိုက နမ်းရှိုက်ချင်စရာ ကောင်းလှသည်။ အင်္ကျီ လက်ပြတ်လေး ဝတ်ဆင်ထားသဖြင့် ဖြူဖွေးဝင်းမွတ်နေသော လက်မောင်းအိုးလေး၊ အရင်းသွယ် အဖျားရှုး လေသော ရွှေဘိုမင်းကြိုက် ပေါင်တန်ရှည်ကြီးများနှင့် မမမြိုင်အလှအပများကို ကျွန်တော်ခံစားတတ်လာသည်။
“ ဟဲ့… ဘာကြည့်နေတာလဲ… မျက်နှာသွားသစ်တော့လေ… ” “ အော်… ဟုတ်… ဟုတ်ကဲ့… ” မမမြိုင်ပြောမှ ကျွန်တော်သတိပြန်ဝင်လာပြီး မျက်နှာသစ်ဖို့ရန် နောက်ဖေးရေတိုင်ကီ ရှိရာသို့ ထွက်လာခဲ့ပြီး ရေခွက်ကိုကိုင်ကာ မျက်နှာသစ်လိုက်လေသည်။ မမမြိုင် ကတော့ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ချွေးတလုံးလုံးနှင့် ထမင်းကြော် နေဆဲပင်။ မျက်နှာသစ်ပြီး၍အိမ်ထဲသို့ပြန်ဝင်လာသောအခါ မမမြိုင်မှာ ထမင်းကြော်ပြီးသွား၍ မီးဖိုချောင်မှာ မတွေ့ရ တော့ပေ။ မမမြိုင် သူ့အခန်းထဲကို ဝင်သွားတာထင်တယ်ဟု ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိသည်။ မမမြိုင်နဲ့ ကျွန်တော့်အခန်း မှာ ကပ်လျက်ပင်ဖြစ်သည်။ အခန်းနှစ်ခုကြားကို ထရံဖြင့်ကာထားလေသည်။ မမမြိုင်အခန်းရှေ့သို့အဖြတ် အခန်းထဲ မှ မမမြိုင်က “ မောင်လေး… ထမင်းကြော်ရပြီနော်… ကိုယ့်ဘာသာဘဲ ခူးခပ်စားလိုက်တော့ မမမြိုင်ကတော့ အိုက်လို့ ရေချိုးတော့မယ်…..” ဟု လှမ်းပြောလေသည်။ ကျွန်တော်လည်း အကြံရသွားပြီ အခန်းထဲသို့ အလျင်အမြန်ဝင်ကာ ထရံကြားမှ မမမြိုင် အခန်းဘက်သို့ မြင်ရအောင် ဝါးထရံကြား အဟလေးကို အသဲအသန်ရှာဖွေရလေတော့သည်။ ကံကောင်းချင်တော့ ဝါးထရံကြားလေးမှ အနည်းငယ်ဟနေသဖြင့် မမမြိုင်အခန်းထဲကို လှမ်းမြင်နေရလေသည်။ မမမြိုင်မှာ အပေါ်အင်္ကျီကိုချွတ်ချလိုက်ပြီး ထဘီကို ရင်လျားလိုက်လေသည်။ မမမြိုင် ပုခုံးသားလေးများမှာ ဖြူဖွေးနုအိသည်ကို မြင်ရလေသည်။
ဘော်လီကိုချွတ်လိုက်ပြီး ထဘီကိုပြင်ဝတ်လိုက်ရတွင်တော့ မမမြိုင်၏ လုံးဝန်းဖြူဖွေး မို့မောက်နေသော ရွှေရင်အစုံကို လှမ်းမြင်လိုက်ရလေသည်။ ထဘီကို အနည်းငယ်မကာ အောက်ခံဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်အချမှာတော့ ဖြူဖွေးချောမွတ်နေသော မမမြိုင်၏ ခြေသလုံးသားလေးများနှင့် ပေါင်တန်ကြီးနှစ်ချောင်းကိုပါ မြင်ရလေတော့သည်။ မမမြိုင်၏ အလှတရားများက ကျွန်တော့်ကို အကြီးအကျယ် ဖမ်းစားနေလေပြီ။ ပေါင်ကြားမှ လီးတန်က အလို အလျောက် တောင်မတ်လာသဖြင့် လက်ဖြင့် အသာအယာ ဖွဖွလေးဆုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်ပေးနေရလေသည်။ မမမြိုင်က ရေချိုးထဘီကို လဲဖို့ရန်ထဘီကို ချွတ်ချလိုက်ရာတွင်တော့ ကျွန်တော်ခေါင်းနပန်းများ ကြီးသွားပြီး မျက်စိကို ထရံဘက်ကို အသာအယာတိုးကပ် ကြည့်မိလိုက်လေသည်။ မမမြိုင်ရဲ့ဆီးစပ်နားတွင် အချုပ်ရာလေးတစ်ခုကို တွေ့မိလေသည်။ အောက်တွင်တော့ အမွှေးရေးရေးလေးများနဲ့ အဖုတ်ကြီးကို တွေ့နေရလေသည်။မမမြိုင်က ရေချိုးထဘီကို ယူရန်တဘက်သို့ လှည့်လိုက်သောအခါတွင် မမမြိုင်ဖင်သားကြီးများက ကြီးမားဝိုင်းစက်နေပြီး ဘေးသို့ပင်ကားနေပြီး အလယ်ကအကွဲကြောင်းမှာ အနည်းငယ် ဟနေသည်ကို ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရလေသည်။ မမမြိုင်က ထဘီကိုအောက်မှ ငုံ့၍ကောက်ယူလိုက်ရာ ကြီးမားဝိုင်း စက် ကားစွင့်နေသော တင်ပါးကြီးများအလယ်မှ အဖုတ်ကြီးမှာ အနောက်သို့ ပြူထွက်လာလေသည်။ ကျွန်တော့်လီးတန်ကြီးမှာ အစွမ်းကုန်တောင်မတ်လာသောကြောင့် လက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင် ထားရလေသည်။ မမမြိုင်မှာ ရေချိုးဖို့ရန် အခန်းအပြင်သို့ ထွက်သွားသဖြင့် ကျွန်တော်လည်း ထမင်းကြော်စားဖို့ရန် မီးဖိုချောင်ဆီသို့ သွားရန်ပြင်လိုက်သည်။
မီးဖိုချောင်ဆီသို့ ရောက်၍ ထမင်းကြော်ကို ခူးခပ်နေစဉ် မမမြိုင်မှာ ရေတိုင်ကီတွင် ရေချိုးနေလေပြီ။ ထမင်းကြော်ကို ဒယ်အိုးထဲမှ ခူးနေစဉ်အတွင်း မမမြိုင်ရေချိုးနေသည်ကို ခိုးကြည့်လိုက်ရာ မမမြိုင် မှာ ဆံပင်ကို ရေမဆိုစေရန် ဆံထုံးထုံးထားလေသည်။ မမမြိုင်လည်ဂုတ်နားမှာ မွှေးညှင်းနုလေးများမှာ ရေစက်လေးများနှင့် တစ်မျိုးကြည့်လို့ ကောင်းနေလေသည်။ ပုခုံးသားလေးများ အပေါ်တွင်လည်း ရေစက်များက ခိုတွယ်လျက်ရှိနေလေသည်။ ဘေးတိုက်မြင်ရသဖြင့် ထဘီက ရေစိုသောကြောင့် မမမြိုင်၏ ကြီးမားကားစွင့် လုံးဝန်းနေသော တင်ပါးကြီးများက ကပ်နေပြီးအလွန်ပင်ကြည့်ကောင်း လှပေတော့သည်။ အတန်ကြာအောင်ရပ်ကြည့်နေရင်း ကျွန်တော့်လီးတန်မှာ အစွမ်းကုန် တောင်မတ် လာပေတော့ သည်။
သို့ပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့စူးစိုက်ပြီး မမမြိုင်၏အလှအပများကို ခံစားနေလေသည်။ မမမြိုင်က ရေချိုးနေ ရင်းမှ လှမ်းကြည့်ပြီး “ ဟဲ့…. ဘာလုပ်နေတာလဲ… ရှေ့မှာသွားမစားဘူးလား… ကော်ဖီသောက်ချင်ရင်… ကော်ဖီမစ်ထုပ် ရှိတယ်နော် ” ကျွန်တော်မှာ သူခိုးလူမိသကဲ့သို့ ဖြစ်သွားပြီး ကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်နေရာ…. မမမြိုင်က “ အဲမှာဘဲ ထိုင်စားရင်စားလေ…. မမမြိုင်ရေချိုးပြီးရင် ကော်ဖီဖျော်ပေးမယ် နော်…. ခဏစောင့်……” “ ဟုတ်….ဟုတ်ကဲ့….မမမြိုင်…..” ကျွန်တော့်မှာ ရေငတ်တုန်းရေတွင်းထဲကျ ဆိုသလိုမျိုး မမမြိုင်ရေချိုးနေသည်ကို ထမင်းကြော်စားရင်း ကြည့်ရတော့မည်ကို ဝမ်းသာသွားလေတော့သည်။ မီးဖိုချောင်တွင်လည်း စားပွဲတစ်လုံးနှင့် ကုလားထိုင်များ ရှိပါသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သားငါးများအား ခုတ်ထစ်ဖို့ရန်အတွက် ထားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုတော့ ကျွန်တော်သည် ထိုနေရာမှနေ၍ ထမင်းကြော်စားရင်း မမမြိုင်၏ ရေစိုနေသောခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို အားရပါးရကြီး ကြည့်ခွင့်ရလေတော့၏။ မမမြိုင်သည် ရေချိုးနေရင်းမှ လက်တဖက်ဖြင့် သူမ၏ပေါင်ကြားသို့ ပွတ်တိုက်နေပါသည်။
မမမြိုင်သည် တဖက်သို့လှည့်ကာ ဆပ်ပြာကို ခြေသလုံးသားများသို့ ငုံ၍တိုက်နေသောအခါ မမမြိုင်၏ ကြီးမားကားစွင့်နေသော ဖင်သားကြီးများက ရေစိုနေသောထဘီအောက်မှ ရုန်းထွက်တော့မတတ် ကြွတက်နေလေတော့သည်။ ထိုအချိန် တွင် မမမြိုင်ရေချိုးနေသောနေရာ အနောက်နားသို့ ခွေးဝဲစားခွေးထီနှင့် ခွေးမရောက်လာပြီး ခွေးထီးက ခွေးမ နောက်သို့ တက်ခွပြီး ညှောင့်နေလေတော့သည်။ မမမြိုင်သည် တချက်မျှ လှည့်ကြည့်ပြီး မသိချင် ယောင်ဆောင် ကာ ဆက်လက်၍ ရေချိုးနေလေသည်။ ကျွန်တော့်မှာတော့ မမမြိုင်ရော ခွေးထီးနဲ့ခွေးမတို့၏ လိုးပွဲကိုပါ မျက်တောင် မခတ်စတမ်း ကြည့်နေမိလေတော့သည်။ မမမြိုင်မှာ ရေချိုးနေရင်း နားထဲသို့ ရေဝင်သွား၍ထင် ခြေတဖက်ကိုဆောင့်ကာ နားထဲမှ ရေကိုခါထုတ်နေလေ သည်။ ထိုအခါတွင်တော့ မမမြိုင်၏လုံးဝန်းကားစွင့်နေသော ဖင်သားကြီးနှစ်လုံးမှာ ကျောက်ကျောတုံးကဲ့သို့ တတုံ တုံဖြင့် လှုပ်စိလှုပ်စိ ဖြစ်နေလေသည်။ ကျွန်တော်သည် မဆီမဆိုင် ကိုကြွက်ကြီးကို ပြေးသတိရမိလေသည်။ ကိုကြွက်ကြီးသာ ဤကဲ့သို့သော မြင်ကွင်းကိုမြင်ရပါက မည်ကဲ့သို့ဖြစ်မည်နည်းဟု စဉ်းစားမိလေသည်။ မမမြိုင်က ထဘီရင်လျားကို ပြန်ပြင်ဝတ်သောအခါ မို့မောက်ဝင်းမွတ်နေသော ရွှေရင်အစုံကို လှစ်ခနဲမြင်ရပြန်လေ သည်။ မမမြိုင်သည် ရေကန်ဘောင်ကို အားပြုကာ ထိုင်ထပြုလုပ်နေပြန်သည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင်တော့ ထူးဆန်းစွာ မမမြိုင် ဘာလုပ်တာပါလဲဟု တွေးထင်မိနေပါသည်။
မမမြိုင်က ရေကန်ဘောင်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အားပြုကာ အောက်သို့ထိုင်ချလိုက်စဉ်တွင် ရေစိုနေသောထဘီက မမမြိုင်၏ ပြိုင်စံရှားတင်ပါးကြီးများကို တင်းကျပ် စွာကပ်သွားပြီး ခြေသလုံးသားများနှင့် ထိကပ်မိသွားပြီး လှုပ်စိလှုပ်စိဖြစ်သွားလေသည်။ မမမြိုင်က ကျွန်တော့်ဘက် သို့ ကျောပေးကာ ထဘီကိုဒူးအထက်သို့မတင်ပြီး ရေညှစ်နေသောအခါ မမမြိုင်၏ ဖင်သားကြီးနှစ်လုံးနှင့် အလယ်မှာ အကွဲကြောင်းကို ထင်ထင်ကြီးမြင်ရလေသည်။ မမမြိုင်၏နောက်ပိုင်းအလှသည်ကား ပြိုင်စံရှားဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ပင် ရပ်ကွက်ထဲမှ လူပျိုကြီးများ၊ အိမ်ထောင်သည်များပင်မကျန် မနက်မမမြိုင်ဈေးသွား၍ လက်ဘက်ရည် ဆိုင်အရှေ့မှအဖြတ် အားလုံး၏ မျက်လုံးတွေက မမမြိုင်၏ နောက်ကျောသို့သာ ကပ်ပါသွားကြလေသည်။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးများသည် မမမြိုင်၏ ဖြူဖွေးချောမွတ်၍ ရေစိုနေသော ခြေသလုံးလေးများဆီကို ကြည့်မိလိုက်လေသည်။ မမမြိုင်၏ အသားအရည် သည်လည်း ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်ပင် ဖြစ်လေသည်။ လွန်စွာမှပင် ကြည့်လို့ကောင်းလှ၏။ မမမြိုင်ရေချိုးတာကိုကြည့်နေရင်း ကျွန်တော့်လီးတန်ကြီးမှာ လွန်စွာမှပင် တောင်မတ်လျက် ရှိလေသည်။ ကျွန်တော်သည် ခွေးထီးနှင့်ခွေးမလိုးသကဲ့သို့ မမမြိုင်ဖင်ကြီးအား လေးဘက်ကုန်းခိုင်းလျက် နောက်မှနေ၍ အလွန် လိုးချင်နေမိသည်။ ကျွန်တော်သည် ကျွန်တော့်လီးတန်ကြီးအား အသုံးပြုချင်သောစိတ်များ ပေါ်လွင်လာရပါတော့ သည်။ ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်လောက်ထိ ငေးမောတွေဝေနေမိသည် မသိပါ။ ပျော့ပျောင်းနူးညံ့သောလက်များသည် ကျွန်တော့်ပုခုံးပေါ်သို့ ကျလာမှ ပြန်သတိ ရမိလေသည်။
“ ဟဲ့…… မောင်လေး….. ထမင်းကြော်မစားဘဲ… ဘာတွေစဉ်းစားနေရတာတုံး…” “ အင်း……အို……မမမြိုင်…..ကျွန်တော်သိချင်လိုက်တာ….. ဟိုးဟိုး…. ဟာ… ဘာဖြစ်နေတာလဲဟင်……” ကျွန်တော်သည် ကြံမိကြံရာ ပြောမိပြောရာ ခွေးထီးနှင့်ခွေးမလိုးနေသည်ကို မေးဆတ်ပြပြီး မမမြိုင်ကို မေးလိုက်ပါတော့သည်။ ကျွန်တော်က ဒီလိုမေးလိုက်သော အခါတွင်တော့ မမမြိုင်က ခွေးထီးနှင့်ခွေးမကိုကြည့်ပြီး ပြုံးပါသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုလည်း စူးစိုက်ပြီးကြည့်ပါသည်။ ကျွန်တော်က စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်ကလေးနဲ့မို့ မမမြိုင်၏ စူးစိုက်မှုကို အနေခက်ရလေတော့၏။ ကျွန်တော်သည် မမမြိုင်ဆီမှ တုံ့ပြန်မဲ့စကားကို စောင့်ဆိုင်းနေမိပါ၏။ “ ပြောလေ….. မမမြိုင်…. ဟိုဟာ… ဘာဖြစ်တာလဲဟင်……” “ အို….. မောင်လေးကလဲ… ဘာတွေရှောက်မေးနေတာလဲ…. နင်ငယ်ငယ်ကလေးဘဲ ရှိပါသေးတယ်….. ဒါမျိုးကို သိချင်လို့မကောင်းဘူး… ဟဲ့….. ” မမမြိုင်ကတော့ မူပါပါနဲ့ပြောသည်။ ကျွန်တော့်မျက်စိကတော့ မမမြိုင်၏ကြီးမားစွင့်ကားနေသော တင်ပဆုံ ကြီးကိုသာ အနီးကပ်စူးစိုက်ကြည့်မိနေလေသည်။ကျွန်တော့်ရင်မှာလည်း တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ခုံမြည်လျက်ရှိပါတော့သည်။ “ ပြောပြပါ… မမမြိုင်ရယ်….. ကျွန်တော်သိချင်လို့ပါ……” ထိုအခါတွင်တော့ မမမြိုင်သည် ကျွန်တော့်တကိုယ်လုံးကို သိမ်းကြုံးကြည့်ပြီး …. “ ဒါမျိုးဆိုတာ မကြည့်လဲမကြည့်ရဘူး… မပြောလဲမပြောရဘူး….. နင်သိပ်ကဲတာဘဲ ကဲပါ…. မောင်လေး သိပ်သိချင်နေရင် မမမြိုင်ညကျမှပြောပြမယ်…. ကြားလား…..” မမမြိုင်ကတော့ သူ့စကားဆုံးသွားတော့ လှည့်ထွက်သွားပါသည်။
ကျွန်တော့်မှာတော့ မမမြိုင်၏နိမ့်ချည် မြင့်ချည်ဖြစ်ကာ ခါယမ်းနေသော တင်ပါဆုံကြီးကိုကြည့်ကာ တံတွေးမျိုချမိလိုက်ပါတော့သည်။ ဒီလိုနဲ့ဘဲ အချိန် က ညဘက်သို့ ချည်းနင်းဝင်ရောက်လာပါတော့သည်။ ကျွန်တော်သည် အခန်းတွင်းသို့ဝင်ကာ အိပ်ယာပေါ်တွင်လဲလျောင်းနေရင်း မမမြိုင်ကို စောင့်နေလေသည်။ ကျွန်တော်က မမမြိုင်သူ့အခန်းထဲကို ဝင်လာရင် နေ့လည်က ပြောပြမည်ဟု ပြောထားသောစကားကို အစကောက်ကာ မမမြိုင်၏ဖင်ကြီးကို ကုန်းခိုင်းပြီး လိုးရန်ကြံစည် နေမိလေသည်။ အိပ်ယာထက်တွင် စဉ်းစားရင်းအိပ်ပျော်သွားပါသည်။ အိပ်မက်ထဲတွင်တော့ မမမြိုင်က လေးဘက်ကုန်းလျက် ကျွန်တော်က မမမြိုင်၏ဖင်ကြီးကို လက်နှစ်ဘက်ဖြင့် ကိုင်ကာ အားရပါးရကြီး ဆောင့်လိုးလျက်ရှိနေပါသည်။ တရေး နိုးလာသောအခါတွင်တော့ တလောကလုံးအိပ်မောကျလျက်ရှိနေပါတော့သည်။ ဟိုအဝေးဆီမှ ခွေးဟောင်သံ သဲ့သဲ့ ကြားရလေသည်။ ခွေးဟောင်သံကြားလိုက်ရသောအခါတွင်တော့ ကျွန်တော်သည် ချက်ခြင်းပင် အိပ်ယာမှထကာ မမမြိုင်အခန်းဘက်ဆီသို့ ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်ပါတော့သည်။ မမမြိုင်မှာအိပ်ယာထက်တွင် လဲလျောင်းလျက်ရှိပါသည်။ အိပ်ပျော်နေဟန်တော့ မတူပါ။ ကျွန်တော်သည် မမမြိုင်အနားသို့ အသာအယာလေးတိုးကပ်သွားပါသည်။
မမမြိုင်သည် သနပ်ခါးကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးလိမ်းထား သဖြင့် သနပ်ခါးနံ့လေးများက အခန်းတွင်းဝယ် မွှေးပျံ့နေပါသည်။ မမမြိုင် ပုခုံးလေးကို ဖွဖွလေးကိုင်ကာ……. “ မမမြိုင်…..” “ ဟင်…….မောင်လေး…….” မမမြိုင်ကတော့ စိတ်မောသလိုနဲ့ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ခေါ်လိုက်လေသည်။ “ ကျွန်တော့်ကို မမမြိုင် ပြောပြမယ်ဆို……” “ အေး…..ပြောပြမယ်……ဒါပေမဲ့….ခက်တယ်ကွဲ့…..မမမြိုင်ပြောပြရမှာက လက်တွေ့မှဖြစ်မှာကွ……” “ အဲဒါကပိုပြီး သဘာဝကျတာပေါ့ မမမြိုင်ရဲ့……ကဲပြောစမ်းပါ…..ဘယ်လိုလက်တွေ့ ပြမှာလဲဟင်…….” “ ဟင်…..မောင်လေးနော်….ဒါမျိုးဆိုတာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောရဘူးနော်…..” “ အို…..စိတ်ချစမ်းပါ…..မမမြိုင်ရယ်….ကျွန်တော် သိရရင်တော်ပါပြီ…..” ကျွန်တော်ကတော့ မမမြိုင်ကိုသာ လိုးဘို့ရန်စိတ်ဆောနေသဖြင့် လွယ်လွယ်ပင် ပြောလိုက်ပါသည်။ မမမြိုင်သည် ကျွန်တော့်၏ အနီးသို့တိုးကပ်လာပြီးတော့ ကျွန်တော့် နှာခေါင်းနဲ့ သူ့ပါးကိုကပ်ပေးပါသည်။ ပေါင်ဒါရနံ့ သနပ်ခါးရနံ့ လေးသင်းနေသော မမမြိုင်၏ ပါးအိအိလေးကို ရှုရှိုက်မိသောအခါ ရင်ထဲမှာဝေဒနာတစ်မျိုးကို ခံစားရလေသည်။ မမမြိုင်သည် ကျွန်တော့်ငပဲဆီသို့ သူ့လက်ကိုဆန့်ပြီး ဆုပ်ကိုင်လိုက်သော အခါတော့ ကျွန်တော့်ငပဲကြီးမှာ မတ်ကနဲပင် တောင်မတ်လာလေသည်။ ထိုအခါတွင်တော့ မမမြိုင်က ပိုမိုပြီးဆုပ်နှယ် ကစားပေးလေသည်။ ခဏကြာသောအခါတွင်တော့ မမမြိုင်၏ လက်တဖက်က ကျွန်တော့်လက်ကို လာကိုင်ပါသည်။ ပြီးတော့ တနေရာ ဆီကို ကိုင်စေလေသည်။ ကျွန်တော့်လက်အတွင်းမှာတော့ တဆုပ်တခဲကြီးနဲ့ အိစက်စက်ကြီးကို ကိုင်နေရသည် ဖြစ်သောကြောင့် အရသာတွေ့နေမိပါသည်။
“ ဆုပ်နှယ်ကစားစမ်း…မောင်လေး….” မမမြိုင်ပြောသလို ကျွန်တော်က လုပ်ပေးလိုက်လေသည်။ ဟုတ်ပါသည် မမမြိုင်၏ ရွှေရင်ဖြိုးဖြိုးနို့ကြီးနှစ် လုံးက ဆုပ်နှယ်လိုက်တိုင်း တကိုယ်လုံး ဓာတ်လိုက်ခံရသလိုပင် ခံစားနေရပါပြီ။ “ မောင်လေး….” “ ဗျာ…..မမ….” “ မမ…..နို့ကိုစို့စမ်းပါကွယ်…..” ကျွန်တော်သည် မမမြိုင်၏ နို့သီးခေါင်းစိမ်းလေးများကို စို့ပေးနေမိသည်။ ထိုအခါမတော့ မမမြိုင်သည် လူးလွန့်လာသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။ နို့စို့ပေးလိုက်သောအခါတွင် မမမြိုင်၏လက်က ကျွန်တော်၏ လီးတန် ကို ပိုပြီးဆုပ်ကိုင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတော့သည်။ ကျွန်တော့်စိတ်တို့မှာလည်း တဖြေးဖြေးနဲ့ ဘယ်လိုခံစားမှုမှန်း မသိအောင်ပင် ဖြစ်နေရလေသည်။ ကျွန်တော်သည် မမမြိုင်၏ နို့နှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့ပေး နေပါသည်။ မမမြိုင်သည် ကျွန်တော့်၏လုံချည်ကို ကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်လေသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်လက်ကိုလည်း တခုသောနေရာသို့ ဆွဲတင်လိုက်ပါသည်။ “ ပွတ်ပေးစမ်း…..မောင်လေး……” ကျွန်တော်ကတော့ မမမြိုင်ပြောသလို ပွတ်ပေးလိုက်ပါသည်။ မမမြိုင်၏ ဖေါင်းဖေါင်းအိအိ စောက်ဖုတ် ကြီးပေါ်မှ လက်ညိုးဖြင့် အထက်အောင်ပွတ်ပေးလိုက်လေသည်။
ကျွန်တော် ပွတ်ဖန်များသော အခါတွင်တော့ မမမြိုင်မှာ တအင်းအင်းဖြစ်လာပြီး…. “ မောင်လေး….” “ ဗျာ…..မမမြိုင်…..” “ ကဲ…အပေါ်ကိုတက်ပြီးခွစမ်း….” “ ဘယ်အပေါ်ကိုလဲဟင်….မမမြိုင်…..” “ ဗိုက်ပေါ်ကိုကွဲ့…..ဗိုက်ပေါ်ကို….” မမမြိုင်ကတော့ အားမလိုအားမရနဲ့ဆိုပါသည်။ ကျွန်တော်သည် မမမြိုင်ပြောသလိုပင် ဗိုက်ပေါ်သို့ တက်ခွလိုက်ပါသည်။ ထိုအခါမှာတော့ မမမြိုင်က ကျွန်တော့် လီးတန်ကိုဆွဲကာ သူ့အဖုတ်ဆီသို့တေ့လိုက်သည်။ “ မမမြိုင်….ပြောသလိုလုပ်နော်….” “ အင်းပါ……မမမြိုင်ရဲ့ မြန်မြန်ပြောပါ…..” ကျွန်တော်ကတော့ မမမြိုင်ကိုလိုးချင်လှပါပြီ။ မမမြိုင်သည် ကျွန်တော့် လီးထိပ်ကို သူ့စောက်ဖုတ်ဝသို့ တေ့ ပေးပြီးနောက်….. “ ကဲ…..မောင်လေး…..မင်းဟာကြီးကို ဆောင့်သွင်းလိုက်တော့လေ….” “ အင်း….မမမြိုင်…..” ကျွန်တော်ကတော့ မမမြိုင်၏စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ လီးကြီးအား တအားပင် ဆောင့်သွင်းလိုက်လေတော့ သည်။ “ စွပ်…..ဗြွတ်….” ဟူသောအသံနှင့်အတူ “ အင့်….”ဟူသော မမမြိုင်၏အသံကလေးမှာ ပေါ်ထွက်လာပါတော၏။ ကျွန်တော့် လီးကြီးမှာလည်း ပူနွေး သောအရသာကိုခံစားနေရပြီး တကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ် တုံနေမိလေသည်။ မမမြိုင်က သူမ၏ဖင်ကြီးများကို အောက်ကနေ၍ ကော့ပေးနေပြီး ကျွန်တော်ဖင်ကို လက်ဖြင့်ဆွဲဖိလိုက်နှင့် အလုပ်များနေပါသည်။ ကျွန်တော့်မှာလည်း ထိုအခါမှပင် သဘောပေါက်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ကျွန်တော်သည် မမမြိုင်အပြုကိုချည်း အားကိုးမနေတော့ဘဲ မမမြိုင်ဖင်ကြီး ကော့ပေးလိုက်တိုင်း ဆောင့်ဆောင့်ချ၍ လိုးရာ ဂွင်ကျပြီးအရသာများ ထူးကဲလာရပါတော့သည်။ ကျွန်တော်သည် အရသာကိုသိသောအခါတွင်တော့ ပိုမိုပြီး ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း ဆောင့်မိလေတော့သည်။
ထိုအခါတွင် မမမြိုင်သည် တအင့်အင့်နှင့် ဝေဒနာကို ခံစားနေရသလိုဖြစ်နေပါ၏။ အချက်သုံးလေးဆယ်လောက် လိုးဆောင့်ပြီးသောအခါတွင်တော့ ကျွန်တော့် လီးတံအတွင်းက လရည်များက မမမြိုင်၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ လွှတ်ထုတ် မိလေတော့သည်။ ကျွန်တော်သည် ချက်ခြင်းပင် တကိုယ်လုံးတဆတ်ဆတ်တုံပြီးတော့ အသဲနှလုံးထဲမှာ အမျိုးအမည်မသိသော ဝေဒနာကို ခံစားလိုက်ရပါသည်။ ကျွန်တော့်မှာ တက်တက်ကြွကြွရှိပြီးနောက် ငြိမ်သွားရပါ တော့သည်။ မမမြိုင်မှာလည်း ကျွန်တော်အား တအားပင် ပြန်ဖက်ထားပါသည်။ ကျွန်တော်သည် မမမြိုင်၏ကိုယ်ပေါ်မှာ လူးလွန့်နေမိပါသည်။ မမမြိုင်သည် သက်ပြင်းချပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ပါးချင်းကပ်ထားပါသည်။ ပြီးတော့…… မမမြိုင်က…. မပွင့်တပွင့်ပြောသည်။ “ ဘယ်လိုလဲ….မောင်လေး……သိပြီလား…..ကောင်းလား…..” “ အား…..အရမ်းကောင်းတာဘဲ…..မမမြိုင်….” မမမြိုင် ကိုယ်ပေါ်မှာဘဲ ခဏမှိန်းနေရင်းမှ မမမြိုင်၏ သနပ်ခါးရနံ့ သင်းနေသော ပါးလေးနှစ်ဖက်ကို အားရပါးရ မွှေးကြူလိုက်ပါသည်။ မမမြိုင်မှာလည်း ကျွန်တော့်ကို ပြန်လည်ပြီး ဖက်ရမ်းနမ်းရှုတ်လေရာ လီးကြီး မှာ တောင်မတ်လာပါတော့သည်။ ကျွန်တော့်သည် မမမြိုင်၏ ပေါင်နှစ်လုံးကို ပုခုံးပေါ်သို့ မတင်လိုက်ပြီး လီးကြီးကို မမမြိုင်၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ထပ်မံလိုးဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။ မမမြိုင်ကလည်း သူမ၏ဖင်ကြီးကို အပေါ်သို့ ပြန်ပြန်ကော့တင်ပေးလေရာ အဆောင့်နဲ့အပင့် အတော်ပင် စည်းချက်ညီလေသည်။ ထိုအခါမှာတော့ ကျွန်တော့်စိတ်မှာ ပိုပြီးလှုပ်ရှားလာပါသည်။
ထိုကြောင့်ပင် ကျွန်တော်သည် စိတ်လိုက်မာန်ပါပင် ဆောင့်လိုက်မိသော အခါမတော့…. “ ဖွတ်….ဖတ်…..ဘွတ်….ပလွတ်….” ဟူသော အသံပင်ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ တိတ်ဆိတ်သော ညကာလဖြစ်သောကြောင့်ပင် အသံမှာ အခန်း တွင်းဝယ် ညံနေပါတော့သည်။ ကျွန်တော့်၏ အားပါးသော ဆောင့်ချက်များကြောင့် မမမြိုင်မှာလည်း တအင်းအင်းနဲ့ ခံစားနေရပါသည်။ “ မောင်လေး…..” “ ဘာလဲဟင်…..မမမြိုင်…..” “ ဖြေး ဖြေးကွယ်…… သူများတွေ ကြားကုန်ပါအုံးမယ်……” မမမြိုင်၏အသံမှာ အရင်ကနဲ့မတူဘဲ အလွန်ပင် တပ်မက်နေသော အသံဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် မမမြိုင်ပြောလိုက်မှပင် အကြမ်းလိုးဆောင့်နေမှုကို နဲနဲလျော့လိုက်မိပါသည်။ သို့ပေမင့် မမမြိုင်၏စောက်ဖုတ်ကြီးမှ အရည်များကရွှဲရွှဲစိုပြီး ထွက်နေသောကြောင့် စွတ်..ဖွတ်…..စွတ်….ဖွတ်… ဟူသောအသံများက ထွက်မြဲပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ကျွန်တော့်မှာလည်း တခါမျှမခံစားဘူးသောကြောင့် အရသာမှာ အလွန်ပင်ကောင်းနေပါသည်။ ကျွန်တော် သည် ထိုးသွင်းဆွဲထုတ်နဲ့ အချက်မှန်မှန်ကလေးပင် လိုးဆောင့်နေမိပါသည်။ မမမြိုင်မှာတော့ တခါတခါ တဟင်း တဟင်းနဲ့ လူးလွန့်ပြီး ကော့တက်လာပါ။.ပြီးပါပြီ